''Namtichi du'a daa'ima ganna 14'n shakkame hanga ammaatti himannaan irratti hin banamne'' - BBC News Afaan Oromoo
''Namtichi du'a daa'ima ganna 14'n shakkame hanga ammaatti himannaan irratti hin banamne''
Madda suuraa, EWLA
Shakkamaan Caaltuu Abdii mucaa waggaa 14 irraan miidhaa qaqqabsiise hanga ammaattuu himannaan irratti akka hinbanamiin abbookaatoon dhimmicha hordofaa jiran BBC'tti himaniiru.
Caaltuu Abdii baatii afuriin dura erga miidhaan irra qaqqabeen booda dhukkubbii cimaa irra turuun torban darbee lubbuunshee darbeera.
Dhimmicha hordofaa kan turan oggeettiin seeraa olaanoon Waldaa Dubartoota Oggeessoota Itoophiyaa Aaddee Elisaabeet Kabadaa dhimma ifa hintaaneen namticha irratti osoo himannaan hinbanamiin baatii afuur guutuusaa ibsaniiru.
Hirmaannaa dubartoonni siyaasa Itoophiyaa keessatti qaban
Namoonni daa'ima waggaa 3'tti asiidii naqan hidhaman
Poolisiin ragaa walitti qabuun yoo abbaa alangaatiif dabarsu manni murtii idilee galmee akka banu kan himtu abukaatoon tun hanga yoonaatti garuu himannaan akka hinbanamiin beeksiftee jirti.
Himannichi maaliif akka ture kan gaafataman abokaaton kun, dhimmicha kan hordofu qorataan poolisii naannichaa ragaa wallaansaa Harar dhaquun hiiksiisuu sababa jedhuun yeroo hinbarbaachifne fudhachuusaa himaniiru.
Yeroo himannaa banuu itti qabuuttis 'hiikkaan ragaa wallaansaa dogongora qaba' jechuun Harargee geessuun akka lammaffaa Finfinneetti deebii'uun ''ragaa dabalataa barbaanneeti'' jechuun akka turu taasisaniiru.
Ragaan hospitaalaa afaan Ingliffaan akka barreeffamu, afaan mana murtichaa ammoo Amaariffa waan ta'eef, ragicha hiksiisuun barbaachisaa ta'uu ibsuun Magaalaa Finfinnee magaaloota hundarra fooyya'aa ta'e irraa poolisiin ragicha qabatee gara naannootti deebi'uun maaliif akka barbaachise ifa akka hintaane abookaatoo Elsaabeet ni dubbatti.
Dubartootaaf qofaatti geejjiba qopheessuun caalaatti naga qabeessaa?
Erga ragaa wallaansaa fudhatanii booda afur ta'uun deebi'anii dhufuun isaanii fi ragicha qabachuunis hospitaala mucattiin ciisaa turte Yekkaatit 12 dhaquusaanii himtee jirti. Baatii afuriif osoo himannaa hin baniin hafuunis sababiin kanuma.
Seera yakkaatiin poolisiin tokko guyyoota 21 ol beellama gaafachuu hindanda'u kan jettu abukaatoon tun, poolisiin ragaan naaf hingutamne yoo jedhee yeroo sadiif guyyoota torba torbaaf dheereessu akka danda'u himti.
Haa ta'u malee hanga baatii afuriitiif osoo himannaan hin banamiin turuunsaa baayyee akka ajaa'ibsiise himti.
''Baatiiwwan darban keessa mucaan osoo hin du'iin dura jecha ishee kennaa turte. Polisiin deebi'ee dhufa. Maaliif himannaa banuu akka hinbarbaadiin hafan ifa hinturre.''
Ragaan hospitaalaas maddi du'a mucaa kanaa maal akka ta'e ni mul'isa jettee jirti. ''Qaamni ishee %18 kan ta'u gubateera. Harma isheetii kaasee hanga jilbaatti gubattee jirti. Hanga dugda ishees gaheera,'' jetti.
Jalqaba irrattis shakkamaa fi kanneen isa waliin hojjatan mucattii sodaachisaa akka turan, boodas kutaa poolisiin keessatti eegamaa turteetti namoota waliin turteetti, waan irra gahe himuu ishee akkasumas gudeedamuu ishee anatti himtee jirti jechu ibsitee jirti abbukaatoon tun.
Kana malees naannoon qaama saalaa ishee faayiidaan ala ta'usaa fi tarii balaan gubuus kan irratti raawwatamee miidhaa irra gahe sana dhoksuuf ta'u akka danda'u kan tilmaaman hindhabamne. Abbookaatoon tunis tilmaamuma walfakkaatu qabdi.
Kana malees, haala irra gahee hunda anatti himte jirti. Isas warra dhimmicha qorataniifi hakimatti yaa himtuu yaadhiiftu hinbeeku jechuun ibsiti.
Mucaa duutee kana irras balaa erga qaqqabeen booda maatiin ishee humna waan hinqabneefu namni Yekkaatitii 12tti isaaniif wallaansisuu waan hinturreef, booda keessa karaa feesbuukiitiin qarshiin 32,000 walitti qabameen wallaanamaa turuus himtee jirti.
Daarektarri Waldichaa Aaddee Meeroon Araagaaw gama isheetiin Caaltuun erga balaan irra gaheen booda, gargaarsa tokko malee guyyoota 15'f mana keessa akka turtu taasifamu ishee BBC'tti himte.
Sadarkaa gubbannaa mucattii irra gahees kan sadarkaa sadaffaa jedhamuuf hanga lafeetti gubateedhas jette jirti.
Haadhaa fi abbaa Caaltu garuu argachuu hindanda'amne.
"Humna addaa naannichaatiin eegumsi taasifamaaf ture"
Guddattuu Caaltu Abdii, 14, erga nama ishee hojjachiisuun diriqin gudeedamteen booda, dhagala'aan maalumman isaa hinbeekame irratti gadi naqameera. Kanaanis balaan irra qaqabee olaanaadha. Mucaan kunis mana nama shakkamaatti akka hojjattuu manaatti hojataa turte.
Osoo wallaansa hinargatiin tursiisanii '' dhukkubbiin itti cimee lubbuusheef wayita sodaachisu hospitaala Arbanyoochi Harargee Bahaatti geessan.
Isaan bodas namni akka hinagareetti kutaa qofaa keessa akka ciftu taasifamte. Namoonnis akka achi hingallee poolisootaa naannichaatiin dhorkamaa akka ture BBC'tti himaniiru. ''Narsiin ishee wallaanaa turees kan alaa mindeefameedha,'' jechuun dubbicha baayyee wal xaxaa ta'usaa himaniiru.
Hojjattoota hospitaalichaa fi namoota firoota isaanii dhukkubsachiisaa turan haallichi gaaffii waan itti umeef jecha ilaaluuf yoo yaalanitti poolisootaan dhorkamaa akka turan natti himaniiru jetti Addee Elsaabeet.
Boodaras kutaa namoonni 10 keessa cisan aka qofaashee turtu taasifamu itti himuu fi waan irra gahe hundas isaanitti himu abbukaatoon tun ni dubbatti.
Namni miidha kana irraa gahees kan gaa'ila qabuu fi haatii warraa isaas to'annoo jala olfamtu illeen guyyaa tokkoon booda gadhiifamu ishee Elsaabeet ni dubbatti.
"Harariitti awwaalamtu malee jechuun lafa qotanii turan"
Namni dhimma Caaltuu hordofaa turaniifi maqaan isaanii akka hineeramne gaafatanii turan tokkos, dhimmicha dhoksuuf qoondaaltoonni bulchiinsoonni motummaa naannoo Hararii fi firoonni shakkamaa harka keessaa akka qaban himaniiru.
Kana malees, dhimma ishee ilaalchisee TVn oduun akka hindabarreef dhiibbaa taasisaa turuusaaniifi akka jecha ishee geeddartuuf dhiibaa taasisaa turan jedhaniiru.
Aaddee Meeroon haadha ishee irraan dhaga'e jechuun BBC'tti akka himteetti, Hospitaala Harargeetti poolisoota meeshaa hidhataniitu Caaltuu eegaa ture. Kunis ''haallichi dhokate akka hafuuf yaaliin taasifamaa turuusaa kan agarsiisuudha'' jedhaniiru.
Haalawwan kanneen xiyyeefannaa keessa galchuudhaa haalli haqaa hangam dhuga qabeessa ta'a jedhamuun gaaffii dhiiyaateef, Aaddee Meeroon dhimmichi Naannoo Harariitti kan ilaalamu yoo ta'ee haala adeemsa haqaa irratti dhiibbaa akka qabaatu abbaa alangaa waliigala Federaalaatti iyyachuu ishee himtee jirti. ''Abbaa alangaa waliigala Federaalaas deebii naaf kenneera,'' jette jirti.
Maatiin shakkamaas maallaqa dabalatee haalawwan garaa garaatiin sosobbii taasisaa akka turan kan himan namni kun, sirni awaalcha ishee illeen magaalaa Harariitti akka raawwatamuuf bakka awaalchaa qotanii akka turelleen namni kun ibsaniiru.
''Mirga keenya eenyu nuuf kennuu waan hindandeenyeef, dubartoonni namoota irraa utuu hineegin ofumaa qabsaa'u qabu.''
Viidiyoo, Harma koo bitaa natti qorrinaan
20 Onkololeessa 2017
23 Adooleessa 2018
25 Onkololeessa 2017
Viidiyoo, Tuutni poolisii dubartoota qofaa osoo ta'ee dhiironni maal yaadu?
Pirezidant Isaayyaas waraana Raashiyaafi Yukireeniif Ameerikaatu sababa jedhan
25 Caamsaa 2022
Qondaalli ABO Kol. Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaatii gadhiifaman
Maareen-jaldeessaa Itoophiyaaf hangam yaaddoodha?
Ertiraan guyyaa walabummaa ishee 31ffaa haala akkamiin dabarsiti?
24 Caamsaa 2022
Ilma horsiisee bulaa daldalaan milkaa'anii badhaaasa Afrikaa injifatan - Woddeessa Yaachisii
Somaaliyaan loltoota ishee 5000 Ertiraatti leenji'an biyyatti deebisuufi
Naannoo Amaaraatti namoonni 4,500 ol to'atamuu ibsame
23 Caamsaa 2022
Waa'ee tarkaanfii 'olaantummaa seeraa N. Amaaraatti kabachiisuu' maal beekna?
22 Caamsaa 2022
Heerri mootummaa Ertiraa maaliif hojii malee waggoota 25'f ture?
CAF isteediyeemiiwwan Itoophiyaa ''haa qotaman'' maaliif jedhee?
21 Caamsaa 2022
Naannoo Amaaraa bakkeewwan tokko tokkotti guyyoota lamaan darban maaltu uumame?
Seenaa jaalalaa loltuu Itoophiyaa booji'ameefi qabsooftuu Ertiraa walitti fide
Barruun Time Ministira Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad akkamiin filate?
Hambaan bineensa durii guddaafi sodaachisaa ta'e qotamee bahe
Dhiira caala dubartootni maaliif gaa'ila diiguuf gaaffii dhiyeessu?
Kooriyaan Kaabaa imala Baayidan gara Eeshiyaa eegdee miisaa'eela dhukaafte
Haleellaa mana barnootaa Teksaasiitti raawwateen daa'imman 19 ajjeefaman
Ameerikaan shira pirezidantii duraanii ajjeesuuf yaadame fashaleessuu himte